उफ् !: मेरो लेखन मभित्रको डरको उपज हो ।
‘उलार’ भन्दा अगाडि मेरा तीनवटा साना काँटीका उपन्यासहरु प्रकाशित भैसकेका थिए । मेरा अघिल्ला दुई उपन्यास २०४१ सालमा र तेस्रो उपन्यास २०५० सालमा प्रकाशित भएका हुन् । ती तीनै उपन्यास पनि मलाई प्रिय छन् । ती उपन्यास अमूर्त र प्रयोगात्मक लेखनको धङधङीमा लेखेको थिएँ मैले । पहिलो उपन्यास ‘नांगो मान्छेको डायरी’मा मैले एउटा बेरोजगार अभिभावकको समस्या र आर्थिक कारणले धराशायी बन्दै गएका सम्बन्धहरुको बारेमा लेखेको थिएँ । दोस्रो उपन्यास ‘विक्रमादित्य एउटा कथा सुन’मा सिंगै विश्व शरणार्थी शिविरमा परिणत भएको तानाबाना बुनेको थिएँ । तेस्रो उपन्यास ‘अतिरिक्त’मा तेस्रो लिंगी पात्रले परिवार र समाजबाट भोगेका समस्याहरु खोतल्ने प्रयास गरेको थिएँ । यी तीनवटै उपन्यासमा व्यक्ति र परिवारका कुरा त छन् तर हाम्रो समाजको चित्र त्यति सबल नभएको आभास हुन्छ मलाई अहिले । ती अभ्यासरत् लेखनका क्रममा आएकाले पनि समाजलाई हेर्ने, बुझ्ने मेरो दृष्टिकोण उति बलियो नभएको पनि हुनसक्छ । तर, उलारमा आएर मलाई आफू समाजसित, समाजका समस्याहरुसित र समस्या निर्माण गर्ने समाजभित्रका अवयवहरुका बारेमा अलिक बढी सचेत र जानकार हुन पुगेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ । हामीले बेहोरिरहेको फोहर राजनीति,त्यसले आम मान्छेमा पारेको प्रभाव मधेशी चरित्र र मधेशको परिवेश मार्फत् ‘उलार’मा अभिब्यक्त भएका छन् । मभित्र मेरो समाज र समाजभित्रको विसंगत राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिचेत भने २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र त्यस आसपासका गतिविधिकै कारण आएको हो । उलारसम्म आउँदा त्यो दृष्टिचेत केही बढ्ता सफा भएको हुनुपर्छ । ठोसरुपले भन्दा उलार मेरो लेखनप्रवृत्तिको टर्निंग प्वाइन्ट पनि हो ।
उलार लेखनको बीस वर्ष हुँदा मेरा मनभित्र एउटा बलियो प्रश्न जन्मिएको छ । उलार कसरी मेरो उपन्यास लेखनको विषय भयो ? यो प्रश्नको जवाफ मैले अरुबाट पाउँदिन । मैले मेरै अन्तर्मनलाई सोध्ने र त्यसैले जवाफ दिने प्रश्न हो यो । हरेक सचेत लेखकले बेलाबेलामा आफैँसित यो प्रश्न गर्छजस्तो मलाई लाग्छ । लेखकले हावामा विषय चयन गर्दैन । उसका विषय चयनका केही निश्चित आधार अवश्यै हुन्छन् । लेखकको आफ्नो भूगोल अनि समाजसितको जुडाव, उसको अध्ययनको परिपाटी, उसको निजी आनीबानी र संस्कार, उसको आफ्नो परिवार र समाजका विविधपात्रहरुसितको संगत र सहकार्य, उसले आफू बसेको समाजले बेहोरिरहेको आर्थिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक गतिविधि, त्यसमा उसको सचेतता र सहभागिताजस्ता कुराबाट लेखकका लागि उसको लेखनका प्राथमिकताहरुको निर्धारण हुन्छन् । लेखन त्यसैले सामाजिक प्रतिवद्धता पनि हो । मेरो समाजसित चेतन या अवचेतनमा मैले गरेका संवाद, मैले राखेका अपेक्षा र मैले गरेका वाचाहरु नै मेरो लेखनमा प्रतिविम्बित हुने रहेछन् । उलार सायद त्यसैले मेरो लेखनको विषय बन्न आइपुगेको हो ।
र एउटा अर्को कुरा । नेपालगन्ज बसुन्जेल मैले त्यहाँको जनजीवन र समस्याहरुका विषयमा उति धेरै केही लेखेको जस्तो लाग्दैन । त्यतिन्जेल म ब्यक्तिका मनोगत समस्या र कुण्ठाहरु बढ्ता लेख्थे । तर काठमान्डौ आएपछि मैले आफूभित्र नेपालगन्ज पनि लिएर आएछु । जसरी अध्ययनका लागि घरबाट टाढा आएको एउटा विधार्थीलाई शुरुशुरुमा घरका सम्झनाले बिछट्टै सताएर ‘होमसिक’ भैरहन्छ । मलाई पनि त्यसै भयो । ‘होमसिक’ त चाँडै निको भयो । तर नेपालगन्जप्रतिको आशक्ति मेरो मनभित्र अझ प्रबल बनेर आयो । म राजधानीमा बसेर प्रत्येकपल नेपालगन्जका गल्लीहरुमा रुमल्लिन थालेँ । नेपालगन्जमै बसेर मैले नदेखेका नेपालगन्जका दृश्यहरु राजधानी छिरेपछि झन् प्रखर र स्पष्ट भएर आए । सायद नोस्टाल्जियाकै उपज हो उलार । त्यो नोस्टाल्जिया आज पर्यन्त मभित्र कायम छ ।
अरविन्द अडिगाको बारेमा खुशवन्त सिंहले भनेका थिए‘अडिगाले समाजको गरिबी बाहेकको मुहार पनि पहिल्याउनु पर्छ ।’ यथार्थवादको नाममा सधैँ गरिबी,पीडा र समाजका निरीहता नै लेखिरहनेहरुका लागि व्यंग पनि होला यो । यथार्थवादको यति नै सीमितता हो भने साहित्यको विस्तार र विस्तृतिको लागि यो घातक पनि हुनसक्छ । मलाई प्रखर कल्पनाशीलता पनि मन पर्छ । त्यसैले यथार्थवादले डुबायो भन्ने कुमार नगरकोटीका रचना पनि मलाई प्रिय लाग्छन् । यथार्थलाई जब वादको घेराभित्र सिंगारपटार गरेर कैद गर्छौँ, त्यतिबेला खुशवन्त र नगरकोटीको चिन्ता जायज लाग्छ । तर वादबाट फुत्किएर यथार्थले जब आफ्नो सक्कली हैसियत देखाउँछ, त्यसपछि त्यसबाट कुनै लेखक विमुख या विरक्त भएजस्तो मलाई लाग्दैलाग्दैन । यथार्थको जमिनमा नटेकी त कल्पनाको उडान भर्न पनि सकिन्न । चंगा त जमिनमै बसेर उडाउने हो । चंगा उडानको असली मजा तब हुन्छ, जब हामी जमिनबाट उडाएर त्यसलाई फेरि जमिनमै अवतरित गराउँछन् । चेट भएर अनियन्त्रित भएर कहाँ खस्छ भन्ने ठेगान नभएको चंगाको उडान एकछिन त रोचक लाग्ला । तर जब चंगा आँखाबाट ओझेल हुन्छ र त्यसको नियतिका बारेमा अनभिज्ञ भइन्छ, चंगा उडानको सम्पूर्ण सौन्दर्य खलास भएर जान्छ । सिर्जना त्यस्तै उडान हो । एकैपटक घागो छाडिदिएर बत्तिएको चंगा हेर्न मजा आउँछ । तर त्यो खस्नै लाग्दा त्यसलाई फेरि तनक्क तन्काएर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दाको सन्तुष्टि अतुलनीय हुन्छ । सिर्जनाले त्यही सन्तुष्टि खोज्छ । तर यथार्थवादको नाउमा जब हामी समाजका घटनाक्रमहरुलाई बिना कौशल, बिना शिल्प सपाट ढंगले अखबारीको वासी फिचर या समाचारझैँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न थाल्छौँ तब यथार्थ एउटा सूत्रवद्ध लेखनीमा रुपान्तरित हुन्छ । त्यसैले यथार्थवादको नाममा हामीले प्राणहीन र अखबारी लेखनबाट मुक्त त हुनैपर्छ । हाम्रो लेखन आफ्नै पूर्ववर्ती लेखनको बिस्तार या एक्सटेन्सनबाट मुक्त हुनुपर्छ । एउटै खालको जडता र रिपिटेशनबाट मुक्त हुनुपर्छ । यथार्थ लेखौँ, तर त्यसको प्रस्तुति, शिल्प र शैलीमा नवीनता र निजता होस् । त्यसपछि मात्र सिर्जनाले पाठकको मनमा पार्ने असर बलियो र स्थायी हुन्छ । पाठकले जब साहित्य पनि अखबारको समाचारझैँ पढ्छ, साहित्य त्यतिबेला पक्षाघातले ग्रस्त हुन्छ ।
म पनि चाहन्छु, मेरो लेखनको केन्द्रमा समाकालीन समाज स्थापित होस् । समाजबाटै म मेरो लेखनको सामग्री एकत्रित गर्दछु । तर ती समाग्रीहरुको संयोजन र प्रस्तुतिमा मेरो निजीपन कतै न कतैबाट प्रकट होस् भन्ने चाहना हिजो पनि मभित्र थियो, आज पनि छ र भोलिका दिनहरुमा पनि रहने छ । यथार्थलाई नभोगी कल्पना पनि गर्नै सकिन्न । जीवनजगतका दृश्यहरुलाई नदेखी सपना पनि देख्न सकिन्न । दृश्यवान जगतलाई नबुझी मनोजगतमा अलिकति पनि विचरण गर्न सकिन्न । त्यसैले यथार्थको सहयोगबिना कल्पनाको उडान गर्ने दावी कुनै लेखकले गर्छ भने त्यो साहित्यमा स्थापित हुने चोर बाटोमात्र हो । एकछिनको रुमानी प्रलापमात्र हो । विश्वमा प्रतिदिन सयौँ, हजारौँको संख्यामा किताबहरु प्रकाशित हुन्छन् । मैले लेख्दै गरेको यही क्षणमा पनि हजारौँ लेखकले आफ्ना भावनाहरुलाई लिपिवद्ध गरिरहेका होलान् । जति लेखे पनि , जति किताब सार्वजनिक भए पनि, फेरि पनि लेख्नका लागि समाजका धेरै कुरा शेष रहेकै हुन्छन् । म त्यही बाँकी बचेको कुरा पहिल्याउन प्रयत्नशील छु ।
आज उपन्यासलेखनको तीस वर्ष र उलार लेखनको बीस वर्ष पूरा गरिसक्दा मैले बुझेको एउटै कुरा हो, हरेक लेखकमा समयवोध हुनुपर्छ । आफ्नो समयमा उसको हस्तक्षेप र उपस्थिति देखिनुपर्छ । जुन लेखकले आफ्नो समयमा हस्तक्षेप गर्दैन, समयले बिस्तारै उसलाई किनारातिर हुत्याइदिन्छ ।
म समयको नदीमा तैरन अझै सिपालुु भैसकेको छैन । तर मलाई यो नदीको भंगालोसित हैन, किनारासित डर लाग्छ । मेरो हरेक लेखन मभित्रको यही डरको उपज हो ।
Posted by Nayan Raj Pandey/Nepal-नयनराज पाण्डे,नेपाल at 1:10 AM
मेरा केही अन्तर्वार्ताहरु
सल्लीपिरमा अर्थ–राजनीतिक चेत-विमल कोइराला
सल्लीपिर-नरुचाइएको जीवन, खोजी नगरिएको अस्तित्व
नौलो लेखनीको संयोजन– सल्लीपिर
सल्लीपिरबारे कुमुद अधिकारीको पत्र
रुमाल लिएर बस्नुपर्ने सल्लीपिर
सुखको घाम जुन नउँदाउने “सल्लीपिर”
सल्लीपिर-सेतो हिमालको छाया
सल्लीपिर: अक्षरको अभिव्यञ्जना-शंकर तिवारी
सल्लीपिर-दु:खका पहाड बोकेर-भोजराज न्यौपाने
सल्लीपिरमा अर्थ-राजनीतिक चेत-विमल कोइराला